Iprofayile yomboniso | EVA 2021: II | Iphepha leendaba laBagcisa abaBonakalayo kwi-Intanethi
Ikhaya » amanqaku » Iprofayile yomboniso | EVA 2021: II
Iprofayile yomboniso | EVA 2021: II
UPHONONONGO LWE-GWEN BURLINGTON ISIGABA SESIBINI SE-EVA KONKE.
URichard Proffitt, Ixesha liphela kude, 2021, ufakelo losasazo oluxubekileyo, iNkqubo yeNdwendwe ye-EVA yama-39 ye-EVA
Okwesibini Isigaba se-39th EVA International, umhlaba kunye nokhuphiswano lwayo ngumba oqhubekekayo ekuthethwa ngawo, uncomekayo ugcina isidingo sawo sokubonakaliswa komzimba. Njengazo zonke ii-biennials zamanye amazwe, i-EVA ichaza amakhonkco phakathi kobudlelwane basekhaya / behlabathi kwinkqubo yayo. Kwesi sigaba, esasiqala ngomhla wesi-2 kuJulayi ukuya kowama-22 ku-Agasti, uEVA ​​wakha umfanekiso wesizwe esijongeka njengaphandle, ngenkqubo yeendwendwe kaMerve Elveren, ethi 'Little Did They Know', egxile kakhulu ekuqwalaselweni ngokutsha nasekuchazeni ngokutsha ulwazi lwembali kunye Ibali lomntu, ubukhulu becala ngezinto zovimba.
Oku kungumzekelo ePark Point, indawo enkulu yemizi-mveliso ngaphesheya kwendlela esuka kwiLidl ephithizelayo, kumda weSixeko saseLimerick, apho umsebenzi unamandla khona. Ukufakelwa kukaRichard Proffitt okunemigangatho emininzi, ukufakelwa eludongeni, Ixesha liyaphela (2021), iqulathe uluhlu lwemizobo ephepheni, imikrolo yodongwe, iimpahla, ubucwebe kunye nezinye izinto. Ubuso obumhlophe obupinki buncamathisela ulwimi lwayo ngaphandle; intsimbi encinci emhlophe ijinga kwintambo; ithanga lipeyintwe kwisitayile seProffitt's idiosyncratic. Le yeyona detritus 'yogcino lobuqu' kwaye njengoko ndikhangela kwi-psyche yobomi begcisa, izandi zesandi sevidiyo ezahlukeneyo zisebenza kwindawo yonke. UMario Rizzi Isibane esincinci (2019) udlala kwibhokisi emnyama ekufutshane, ebhala ngomsebenzi katitshala waseDenmark, u-Anni Kanafani. Ehleli kwinto ebonakala ngathi yi-ofisi yakhe, uKanafani ubalisa ibali elimangalisayo lendlela awamisela ngayo i-kindergartens kwiinkampu zeembacu zasePalestine eLebhanon ukusukela ngeminyaka yoo-1970, kulandela ukubulawa komyeni wakhe, uGhassan Kanafani, umbhali onempembelelo kwinkcaso yasePalestine. Ezi akhawunti zobuqu zidityaniswe neziqendu zabantwana kunye nootitshala babo, kunye neqonga lemidlalo yeqonga Isibane esincinci, Iintsomi ezazibhalwe nguGhassan kuqala kumtshana wakhe, uLamis, naye wasweleka kwibhombu yemoto eyambulalayo. Ewe, imeko yeemvakalelo yale misebenzi iyaqhubeka.
Inkcazo enkulu yeendlela ezininzi ze Uxolelwaniso loMkhankaso weGazi loKhuselo lweGazi 1990-1991 ithatha indawo ephambili ePark Point, ikhokelwa ngumphandi u-Erëmirë Krasniqi (umlawuli we-Kosovo Oral History Initiative). Ibhala ngephulo lokuphelisa ukuBethana kwegazi eKosovo ekuqaleni kolawulo lwengcinezelo lweMilošević - ixesha lokubulawa kosapho oluphikisanayo phantsi kwemithetho yesiko evumela usapho lwendoda eyoniweyo, ilungelo lokubulala umntu othuka yena, emva koko, avumela usapho lwexhoba ukuba liphindezele ukufa kwabo. Imbali ekhohlakeleyo kunye nephulo lokuyiphelisa ithiwe thaca kwizikrini ezimbini, ezibandakanya imbali yomlomo ngohlobo lodliwanondlebe nabo bachaphazelekayo, kunye namaxesha athile aphikisanayo eendibano zoluntu. Umfanekiso omkhulu, obonisa abafazi ababini kwindibano, iinqaba ngaphezulu kwesithuba.
Imisebenzi elishumi elinanye enemibala eqaqambileyo ejijekwayo phezu kwezitena zomthi, iimveliso zoomasifundisane bokubamba ezigcinwe ngaphezulu kweminyaka emibini nguHana Miletić - umzamo kulwakhiwo loluntu kunye ne-ode 'kwimisebenzi yezandla' yemveli yokukhuliswa ngumzobi kwindawo eyayisakuba yiYugoslavia. Imibala yabo eqaqambileyo kunye nendalo ephathekayo icinywe nguDeirdre O'Mahony Iimpazamo (1995-6), uthotho lwemizobo emikhulu kwiteyile engolulwanga, enqunyanyisiweyo esilingi kwisakhelo esinjengebhanile kwikona ekude yegumbi. Ukuthetha nobume bomhlaba, ezi milo zide, zizaliswe yimigca ebonisa umhlaba otywebileyo noqhekekileyo, zizithunzi ezilandelweyo zamatye amakhulu kwintaba iMullaghmore, emi 'kumhlaba okhuphisanayo' weBurren National Park, kwiClare Clare.
Imvelaphi yobundlobongela bembali yomsebenzi ongqonge ifilimu yesincoko sika-Aykan Safoğlu, ziyaret utyelelo (2019), uziva ngathi uyaphinda, uboniswe kwibhokisi emnyama eyakhiweyo, kwaye yeyona nto icamngca ngevidiyo isebenza kule ndawo. Ukuwela imida yamaxwebhu kunye nemifanekiso eqingqiweyo, isixelela ibali lotyelelo eAlter Sankt-Matthäus-Kirchhof, amangcwaba aseNtshona Berlin, ngokusebenzisa iifoto ze-polaroid zomhlobo wegcisa, uGülşen Aktaş. Ekuqaleni, uSafeğlu uthi: "Le yifilimu malunga nokuba kutheni ndingakhange ndikwazi ukufota ixesha elithile." Kukunika imbeko kubuhlobo babo kodwa kukwajonga umgca womzabalazo omzabalazo kunye nomzabalazo weklasi ngeenkqubo zokufota, ezibaliswa lilizwi lomculi elothukileyo kunye nezandi ezifihlakeleyo zesikena.
Ekhaya loomatiloshe, Ugcino lweeBetsy Damon: Abagcini bamanzi iboniswe ngobuchule kwindawo epasejini. Umboniso wevidiyo yentshukumo yobutshaba bamanzi (eyasekwa eMelika ngo-1991) iboniswa kumabonwakude akudala kwizitepsi, ecaleni kweefoto zoovimba beminyhadala eyahlukeneyo kunye nemidlalo yoluntu eyenzeka eChengdu (Sichuan) ngo-1995, naseLhasa (Tibet Autonomous Ummandla) ngo-1996. Ufakelo lwevidiyo kaDiego Bruno, Sika, Ngo-2021, phantse zonke iinkcukacha ezingaqondakaliyo ngoqhushululu olwenzeka ngo-1996 eCutral Có nasePaza Huíncul eArgentina Patagonia. Ibonisa ngokufanelekileyo iinjongo zayo zokuphanda "amandla kunye nokusilela komfanekiso oshukumayo wokuphendula ngovukelo oludumileyo". Kwimizuzu engama-51 ubude, kuvavanya ukuba nomonde komntu ukuhlala ebubini, ontengantengayo, welinye ilizwe, non-linear ibali elipheleleyo.
Njengoko bekulindelekile, imeko ebanzi yokuqhekeka ibanzima kulo lonke ulinganiso lwe-EVA, olwahlengahlengiswa ngokwamanqanaba amathathu ngenxa yesidingo, ukuze luboniswe ngokusesikweni ekuhambeni konyaka. Kanye nokudibana neendawo ezahlukeneyo zokuzibandakanya kwesi sigaba-kubandakanya imiboniso ese-in-situ, ushicilelo, 'Little Did They Know' isiza, kunye neeprojekthi zeposi-ababukeli banethuba lokufumana imisebenzi eyintsalela ukusuka kwisigaba sokuqala, kubandakanya i-Aine McBride's ungenelelo ngoncedo, kunye / okanye umhlaba, 2020, esebenza njenge-ramp efikelelekayo kunye ne-handrail ekungeneni kweKhaya le-Sailor. Kunzima ke ngoko ukuqiniseka ukuba ingaba umntu uthathe enye inkqubo na, kwaye izigaba ezithathu ezahlukileyo zinokuba nemicu yokuzimela okanye yokugqagqana. Imisebenzi ebanzi, zombini kwi-Intanethi nakwiindawo zemiboniso, nangona kunzima ukuzenza kwangoko ziphandwe ngokungqongqo kwaye ziqwalaselwe ngovakalelo olunzulu. Kuyavunywa, ngokubekwa phambili kwimbambano ezininzi zamanye amazwe- kubandakanya nembali ye-geopolotiki yaseKosovo, Patagonia, eyayisakuba yiYugoslavia, iSyria, iLebhanon ne China - kunzima ukufumana imeko yezopolitiko zase-Ireland okanye ubume beli nqanaba. Nangona kunjalo, ilensi eyabelwe amagunya, idityaniswa nemodeli yogcino yogcino, isebenza ukubonisa ukukhathazeka ngexesha elifanelekileyo kubugcisa beli xesha, okunxulunyaniswa nokufuduswa, amava abantu abambalwa kwaye, okona kubalulekileyo, amandla azimeleyo oovimba abagcina imemori esemthethweni.
UGwen Burlington ngumbhali osekwe phakathi kweWexford neLondon.